SomaliTalk.com » Hagardaamada reer Yurub, Habacsanaanta TFG iyo Hurdada Shacabka | Aw-Osman
Hagardaamada reer Yurub, Habacsanaanta TFG iyo Hurdada Shacabka.
between the European Union and the Somali Republic on the status of the European Union-led naval force in the Somali Republic in the framework of the EU military operation Atalanta
Shalay waxay ahayd iibka Xuduud-badeedka Soomaaliyeed ee soohdin beenaanka aan la wadaagno Kenya, waxaa ku xigay khayaanadii Norway iyo UN ee ku aadanayn dacwadii qalfoof badeed Xeebaha Soomaliyeed, taas oo loo adeegsaday dulaalo ku jira dowlada shariifka huwana magaca wasiiro.
Hadaba waxaa intaas oo fadeexadood ka xun, kana dhibaato badan khiyaanada qaran oo ay xambaarsan tahay waraqada ama heshiis beenaadka aad halkaan ka arki doontaan, taas oo sajaran doonta sidaan isleeyahay ama dowguba yahay rag badan oo masuuliyad ka soo qabtay TFG ama ilaa iminka ku jira haykalka dowladeed ee Soomaaliya.
Fadeexadani waa mid lagu sifayn karo godob laga galay qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed, waa mid meel uga dhacaysa jiritaanka Soomaaliyeed iyo aayaha jiilka soo socda, waa dulaalnimo iyo is been fariinmad saamaxday in lagu xadgudbo badda, berriga iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.
Maqaalkaan iyo fariinta uu xambaarsan yahay maaha been abuur iyo dacaayad, maaha kutiri ku teen, mana aha mid lagu doonayo in meel looga dhaco sharafta iyo haybada shakhsi ama koox, balse waa qoraal lagu difaacayo Xuquuqda Muwaadinka Soomaaliyeed, lagu soo noolaynayo sharafta iyo haybada dhimatay ee Shacabka soomaaliyeed, dibna loogu soo celinayo karaamadii dhuntay ee Qaranimadii Soomaaliyeed. Daliilka dhanbaalkaan waxaad ka heli doontaan kaydka lagu xifdiyo heshiisyada iyo warqadaha muhiimka ah ee bahwadaagta reer Yurub ay la gasho wadamada caalamka.
Balse inta aynaan guda gelin ama faahfaahin ka bixin warqadan ama heshiis beenaadkaan waxaa haboon si aynu u fahamno silsilada soo taxnayd ee lagu xaalufinayo khayraadka Soomaaliyeed, lagu daliilsanayo xadgudubka Xeebaha Soomaliyeed, laguna dhaawacayo jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed iyo xuquuqda Muwaadinka, inaan bal dib u yare jaleecno taariikhda iyo sababaha kalifay khiyaanadan iyada ah, iyo dowrka ay Faransiiska iyo Isbayn arimahan iyaga ah.
Hagardaamada Reer Yurub oo ay hormuudka ka yihiin France & Spain:
Waxaynu ka wada dheregsanahay hagardaamada ay reer Yurub u gaysatay shacabka, bay’adeed, bari iyo badeed ee Soomaaliya. Waxba kama soo wareeyin burburkii haykalkii dowladeed 1991 kolkii ay cadaaday in Switzerland iyo Italy ay qashinka warshadaha iyo suntan nugliyeerka ku aaseen meelo ka mid ah Soomaaliya sida agagaarka muqdisho iyo meelo kale ee ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa nool oo jooga ragii Soomaaliyeed ee lagu eedeeyay ficilkaas inay u saxiixeen kana danbeeyeen, iyadoo aan ognahay in wariyeyaal isku deyay inay wax ka ogaadaan arintaas lagu toogtay Muqdisho.
Waxaynu kaloo ognahay xaalufinta khayraadka badeed ee Dowladaha ay ugu horeeyaan Spain iyo France ay ku hayaan xeebaha Soomaaliyeed. Waana taas mida keentay in France iyo Spain ay yihiin dadka ugu qaylada iyo sawaxanka dheer marka laga hadlayo burcad badeedka Soomaaliyeed, taas oo ka dhalatay hoos u dhac wayn oo ku yimid Maalaayiinta tan ee kaaluun ee ay sharci darada uga qabsan jireen xeebaha Soomaaliyeed. Taas oo ka dhalatay dagaalka ay qaadeen dhalinta Soomaaliyeed kuwaas oo loo yaqaan burcad badeed, dagaalkaas ka dibna uu sicirkii Tuunada ee aduunku uu kordhay 60%.
Piracy off Somalia’s coast is a cause of falls in tuna catches in the Indian Ocean – one of the world’s richest sources of the fish, experts say.
Taas waxaa ka sii daran indha adayga ay tuugada reer Yurub sheeganayaan inay haystaan heshiisyo ay si sharci ah uga kaluumaysan karaan xeebaha Soomaaliya. (waa xaqiiq in rag sheeganaya magacyo wasiir kaluumaysi ay jiraan kuwaas caasumadaha aduunka wareeya heshiis hoosaadyo aan cidina ogayn la soo gala shariikadahaas iyo dalalkaas iyaga ah)
Cilmi baaris ay samaysay khubaro Kanadiyaan ah ayaa waxaa lagu sheegay in lacag ahaan in Kaluunka sharcidarada ay ee reer Yurub ay ka qabsadaan xeebaha Soomaaliya ay shan goor ka badan tahay lacagta ay deeq ahaanta u siiso Soomaaliya. (taasi waxay ka dhigan tahay hadii 1 milyan oo deeq ah ay siiyaan Soomaliya waxay xadaan 5 Milyan oo Doolar kaluun u dhigma, inagoo og 1 milyan laftigiisu inuusan sooba dhaafin Nayroobi oo uu dib ugu noqdo iyaga oo si magac ururo aan dowli ahayn ku xada).
Sida ku cad cilmi baaris ay sameeyeen khubaro Ustaraaliyaan ah ayay ku sheegeen in maraakiibta kaluumaysiga ee sida sharcidarada ah uga adeegta xeebaha Soomaaliya ay xaga hore kaga jiraan France iyo Spain.
Bal nuqulkan aan ka soo mid guuriyay qormadaas iyada ah:
A recent Canadian study estimates that the total value of current IUU catch worldwide is between 11 and 26 million tonnes, and valued at between $10 billion and $23 billion annually. The European Union alone is assessed to import half a million tons of fish worth €1.1 billion. It is estimated that illegal fishing by EU vessels has taken out of Somalia more than five times the value of its aid to the country every year.
The impact of such robberies on the high sea has been evident in Somalia, where piracy of one kind begat another. In the chaos that engulfed Somalia since the collapse of Siyad Barré regime in 1991, unlicensed foreign fishing vessels moved in large numbers into the country’s fish-rich waters. In 2005, a UN agency estimated that 700 foreign fishing vessels were operating in Somali waters, many employing illegal and destructive fishing methods. A recent Australian study reported that vessels from France, Spain, Japan, South Korea, Taiwan, Egypt, Kenya, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Yemen, Belize and Honduras have exploited Somalia’s fish stocks with virtual impunity.
Waxaa intaa ka sii xun in tuugadaas is biirsatay oo ay hogaanka u hayaan France iyo Spain ay maanta ku doodayaan ama caalamka isku tusinayaan inay la dagaalamayaan Burcad Badeeda Soomaaliya, taas oo ay uga danleeyihiin in diirada laga dulqaado oo aan la arkin sharcidarada , xadgudubka iyo xaalufinta ay ku hayaan khayraadka badeed ee Soomaaliya.
Sida cilmi baarista aynu kor ku soo aragnay taas oo ku salaysan xaqiiqo aan laga been sheegi Karin , waxaa ku cad in Burcad Badeeda runta ah ay yihiin kuwa xaalufinta ku haya badaha caalamka, kuwa sida sharcidarada ah uga kaluumaysta xeebaha dalalka kale, xulafadaas tuugada ahna waxaa hormuud u ah Faransiiska iyo Isbayn.
Wasiirkii arimaha dibada ee Faransiiska Mr. Kouchner, maqaal uu ku qoray jariidada la yiraahdo “La Figaro” ayuu wuxuu ku tilmaamay cida ka danbaysa xulafada reer Yurub ee la dagaalanka Burcad Badeeda, taas oo ku sheegay inay tahay Faransiiska iyo Isbayn. Soomaalidu waxay tiraahdaa “maxaa waranka iyo weedha kulmiyay” waxaan oran karnaa xulafadni waa mid aan barakaysnayn oo ujeedo badan ah.
Soomaalidu waxay kaloo tiraahdaa “tuugaas lax ma ka dhaarsan lahayd” labada dowladood ee France iyo Spain oo lagu tilmaamay aabayaasha xaalufinta iyo xadista khayraadka badeed ee dalalka kale inay maanta caalamka ka dhaadhacshaan waxaan la dagaalamaynaa burcad badeed Soomaaliyeed waxana oran kartaa waa sheegaso lagu qoslo.
Fadlan fiiri nuqulkaan aan ka soo qaaday qoraalkii Mr. Kouchner.
…..thanks to the French European Union presidency, we launched in partnership with Spain the first European maritime operation under the European Security and Defence Policy – “Atalante” – to provide security for European ships passing through the Gulf of Aden.
Waxaa intaa ka sii dan in maanta Spain ay caalamka ka codsato in cuna qabatayn lagu sameeyo xeebaha Burcad badeedka, meesha Faransiiskuna uu heshiis dowlado aan jirin saxiixo isagoo adeegsaday qowlaysato aan cidna matalin balse ku qaraabta magaca Soomaaliya waa ayaan daro haysata Shacabka iyo Qaranimadii duntay ee Soomaaliyeed. Taasi sowlama mid aha aan dhecee gacmaha ha la ii qabto.
Akhristow waxaan halkaan idiinku soo bandhigayaa cida iska leh ama ka danbaysa heshiis beenaadka Yurub loogu saamaxayo soogelista xeebaha Soomaaliya, ku xadgudibka xuduudaha bad iyo beri , u saamaxida dilka iyo xariga muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ka cafiska waxkasta oo denbi ah oo ay ciidamadaasi ku galaan beriga iyo badaha Soomaaliya. Inagoo og cida heshiiskaas dhinaca Yurub u matalaysay ama kaba danbaysay waa France iyo Spain. Labadaas dal oo soo huwanday Calanka midowga Yurub iyo NATO , kuna andacoonaysa inay la dagaalamayaan waxa loogu yeero Burcad Badeeda Soomaaliyeed, labadaas dal oo sida kor ku xusan ku soo xadgudbaan xuduudaha badeed iyo bari ee Soomaaliya, gacmahoodana ay weli ka qoyantahay dhiigii dhalintii Soomaaliyeed ee ay ku dhileen xeeba dalkooda hooyo, meesha ay qaarkalena ka sooo qabteen beriga iyo badaha Soomaaliyeed laa maantana ku hayaan xabsiyadooda iyagoon horkeenin wax sharci ah.
Waxaa xeer Caalamka u dhigan ah markii uu ciidan uu gelayo xuduud dal kale oo xor ah inuu ku soo galaa ogolaansho iyo heshiis dhexmada labada dal, sidoo kale markii qof danbi galay oo muwaadin ah loo gudbinayo dal kale oo uusan u dhalan si sharci loo horgeeyo waa inuu jiraa heshiis ka dhexeeya labadaad dowladood oo ah inay isku gudbin karaan maxaabiista (extradition treaty). Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa wadama aan weligeed saxiixin ama heshiis la gelin wadan kale iyadoo la balan qaadayo in Muwaadiniinta Soomaaliyeed loo gudbin karo wadan kale si loogu xabiso ama loogu maxkamadeeyo.
Hadaba inoo intaas og , sidoo kale og ficilada ay ciidamada Faransiiska iyo Isbaanishku ka sameeyeen xeebaha Soomaaliyeed, iyagoo ilaa Bariga Soomaaliyeed ka soo qabqabtay dhalinyaro kadibna hore u kaxaystay kuwana sidii xoolo la xaraashayo hadba dowlad laga codsado inay xabsiyadeeda ku hayso sida Kenya, Siishalis iyo Muritaaniya oo uu Faransiisku ka codsaday inay aqbalaan oo xabsiyeeyaan Muwaadiniintaas Soomaaliyeed abaalmarina dhaqaalena uu u balan qaaday hadii ay sidaas sameeyaan. Waxaa wax laga naxo ah inaynaan ogayn cida u fasaxday ku xadgudubka intaa le’eg ee lagu hayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Baaritaan dheer oo ay sameeyeen dad ay weli ku hartay wadaniyad iyo dareen dal iyo dad jacayl ayaa waxay soo heleen warqadii heshiiskaas isaga ah, kaas oo ay dowladaha Midowga Yurub ku andacoonayso inay la gashay ama la xasiixatay dowlada Soomaaliya.
Yaa Saxiixay heshiis Beenaadkaan:
Warqada heshiiskaas waxaa la kala saxiixday 31 December 2008, waxaana qalinka ku duugay nin Soomaaliyeed oo loogu yeero Maxamed Cali Nuur, ninkaas oo dadka u indha daloola xukuumada maanta jirta iyo tii ka horaysayba ay sheegeen in ninkaasi yahay Safiirka Dowlada Soomaaliya u fadhiya Kenya ninkaas oo loogu yeero “Maxamed Cali Ameerika” . Hadaba akhristow waxaa su’aal ah maxaa sababay in safiir Soomaaliyeed oo loo dirsaday Kenya uu galo heshiiska intaas le’eg , aaway wasiirkii Arimaha Dibada Mr. Jangeli, Aaway Ra’iisal Wasaare Nuur Cadde , aawayse Madaxweyne Cabdullahi Yusuf.
Fadlan warqada ka eeg halkaan: AGREEMENT between the European Union and the Somali Republic on the status of the European Union-led naval force in the Somali Republic in the framework of the EU military operation Atalanta.
Go’aankii heshiiskaan gelistiisa oo uu shirgudoon ka ahaa Wasiirka Arimaha Dibada ee Faransiiska Mr. Kouchner fadlan hakaan ka akhriso:
29 December, 2008 ayuu iscasilay Cabdulaahi Yuusuf, sidaa awgeed dowladiisii uu ra’iisal wasaaraha ka ahaa Nuur Cadde iyo Golihiisa Wasiiradu sidaas ayay ku dhaceen.
31 January, 2009 Ayaa Shariif Axmed loogu doortay Jabuuti inuu noqdo Madaxweyne. Taas micnaheedu waxay tahay in wax dowlad Soomaaliyeed la yiraahdo oo awood u leh saxiix heshiis aysan jirin intii u dhaxay iscasilistii Madaxweyne Cabdullahi ee 29 Dec, 2008 iyo Doorashadii Madaxweyne Shariif 31 Jan, 2009.
Hadaba Heshiiska la saxiixay Dec 31, 2009 (Waxaana la faafiyey 15 Janaayo 2009), waa mid khilaafsan qaanuunada dowliga ah, waa mid khiyaano iyo isbeen fariin ku salaysan, waa dulaalnimo iyo dal iibsi aan geed loogu soo gaban, sidaa awgeed ciidamada reer Yurub ee Jooga xeebaha Soomaaliya, iyo dhamaan wixii ficil ay sameeyeen intuba waa mid ka hor imanaysa mabaadida caalamka kala haga, waxayna biyaha iyo bariga Soomaaliya ku joogaana waa xaqdaro iyo xoog.
Kuwa heshiiskaas ka danbeeyay ee masuuliyiin Soomaaliyeed sheeganayana waa khaa’iniin aan dal iyo dad kala jeclayn balse dirham iyo diinaarka dulaalnimo dhaafsiistay sharafkii iyo qaranimadii Soomaaliyeed.
Dadka aadka ugu dhuun duleela arintaas waxay aaminsan yihiin in Ra’iisal Wasaarihii hore Mr. Nuur Cadde arintaan ka danbeeyay, maadaama uu dareensanaa inuu xilkiisii dhacayn laga soo bilaabo 30 Dec, 2008na, wuxuu u xilsaaray saxiixa heshiiskaas Maxamed Cali Nuur. Mr. Nuur Cadde abaal marintii arintaasna wuxuu maanta ku mutaystay inuu noqdo safiirka Yurub iyo Itaaliya u fadhiya Soomaaliya si howlihii wixii qabyo ahaa ay meeshii uga sii socdaan. Ama hadaan hadalka sida kale u dhigo “Haku socoto sidii loogu tala galay” .
Hadaba akhristow su’aasha furan waxay tahay dowllada uu hogaanka u hayo Sh.Shariif Axmed talaabo caynkee ah ayay arintaan ka qaadi doontaa, ma sidii Dulaal Ibbi iyo Shariif Sakiin ayuu xaga danbe marsan doonaa oo ku tilmaami doonaa muwaadiniin aamin ah oo howlkar ah mise Labada Nuur (Nuur Cadde iyo M.A. Nuur Ameerika) talaabo geesinimo ayuu ka qaadi doonaa. Sidoo kale Baarlamaanku ma qaadi doonaan talaabo la mid ah tii ay ku diideen iibsiga badeed, mase horkeeni doonaan baarlamaanka hortiisa Labadaas masuul iyo intii kale oo arinta ku lug lahayd, sidoo kale ma la xisaabtami doonaan Madaxweyne Shariif iyagoo dib u eegi doona wixii uu balan qaaday inuu sameeyo iyo wixii ay dowladiisa, wasiiradiisa iyo safiiradiisu sameeyeen taas oo meel ka dhac dhaawan u gaysatay qaranimadii iyo jiritaankii Soomaaliyeed ah. Shacabka Soomaaliyeed aqoon yahan iyo indheer garadba ma midnimadii iyo difaacii ay ka muujiyeen khadiyadii xuduuda badeed lagu iibsanayay ayay samayn doonaa mise sheekadu waxay noqon doontaa “Afkii baa juuqda gabay”.
Ma Dhulkan dhanee tagay baa nina dhagax u tuuraynee!!!! Uurku taalo waynaayee!!!!
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: EU, NATO
2 Jawaabood " Hagardaamada reer Yurub, Habacsanaanta TFG iyo Hurdada Shacabka | Aw-Osman "
Thursday, November 26, 2009 at 10:17 am
very heart touching evidences…….. thanks mr. osman for your effort, discovering these evidences to the unpridectable somalia we will hope these things will no more hurt the minds of the somali nationalists as the time seems to be the end of the black era
aad iyo aad ayad ugu mahadsantahy farah aw osman runtii wahabka ayaad naga kicisay dadaalkaaguna aad iyo aad ayad ugu mahadsantahay ladagaalanka mugdiga aad ugu jirtid , wailba waxaan jeclaan lahaa inaad samaysid urur lagu magacaabayo LIGHT THE DARKENNS iftiiminta meelaha mugdiyaasha